ကျောင်းအပ်နှံရာတွင် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ မည်သည့် အကြောင်းနှင့်မျှ ငွေေ? - Yangon Media Group
ကျောင်းအပ်နှံရာတွင် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ မည်သည့် အကြောင်းနှင့်မျှ ငွေေ?
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ လိုက်နာရမည့် အချက်များအဖြစ် မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှငွေကြေး ကောက်ခံခြင်းမပြုလုပ်ရန် ပညာ ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက် ကြောင်းသိရသည်။
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများအားလုံးနှင့်အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအားလုံးသည် မည်သည့်အခကြေးငွေမျှကောက်ခံ ခြင်း၊ လက်ခံခြင်းမပြုလုပ်ရ၊ ကျောင်းဝတ်စုံအတွက် အတန်းတံဆိပ်နှင့် ကျောင်းဝတ်စုံများ ရောင်းချခြင်းများမပြုလုပ်ရ၊ အခြားမည်သည့် ပစ္စည်းကိုမျှ ရောင်းချခြင်းမပြုလုပ်ရ၊ အသက်ငါးနှစ်ပြည့်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို သူငယ်တန်းတွင်လည်းကောင်း၊ အသက်ခြောက်နှစ်ပြည့်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို ပထမတန်းတွင်လည်းကောင်း ကျောင်း နေအရွယ်ကလေးများ ကျောင်းအပ် နှံခြင်းကိုလက်ခံသွားရမည်ဖြစ် ကြောင်း အစရှိသည့်အချက်များကို လိုက်နာရန်အတွက် မေ ၂၁ ရက်က ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှသိရသည်။
”ဒါက ဝန်ကြီးဌာနရဲ့နှစ်စဉ် ကျောင်းအပ်နှံရေးနေ့နီးလာရင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာတွေကို ထုတ်ပြန်တာပေါ့။ ပညာရေးဝန် ထမ်းတွေအနေနဲ့ ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်၊ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလေး စားလိုက်နာဖို့လိုပါမယ်။ ဌာနရဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို မလိုက်နာရင် ဌာနဆိုင်ရာအရေးယူခြင်းကိုခံရပါမယ်။ ရှေ့မှာလည်း ဌာနဆိုင် ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ဖောက်ဖျက်တဲ့အတွက် စစ်ဆေး အရေးယူတာတွေကို လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်”ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှအရာရှိတစ်ဦးက မေ ၂၂ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ထားသည်မှာ ကျောင်းသားမိဘများနှင့် ပြည်သူများကို မေတ္တာရပ်ခံထားသည်မှာ မြို့နယ်အလိုက် သတ်မှတ်နယ်မြေများတွင်သာ ကျောင်းအပ်နှံရန်၊ ပညာရေး ဝန်ထမ်းများအား ငွေကြေးတံစိုး လက်ဆောင်များ မပေးအပ်ရန်၊ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတိုင်း ကျောင်းအပ်နှံကြရေး ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကျောင်းတက်မှန်စေရေး၊ အိမ်စာမှန်မှန်လုပ်ဆောင်ရေးအတွက် ဆိုင်ရာပညာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အစရှိသည့်အချက်များကို မေတ္တာရပ်ခံကြေညာထားကြောင်းသိရသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံးသို့တိုင်ကြားလိုပါက ပညာ ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁၃) နေပြည်တော် သို့မဟုတ် dpoffice @moe- mm.com သို့တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ကြေညာချက်များတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်။